FAQs - Ningbo Sellers Union Dhimoni Duku & Exp Co., Ltd.
Pet Zvigadzirwa Zone
Kisimusi Item Nzvimbo
Zvemitambo Zvigadzirwa Zone
Indoor Fitness Midziyo
Kunze Kwemitambo Zvigadzirwa
Tsika Yekusimudzira Zvigadzirwa
Wepamusoro China Sourcing Agent
Yiwu Musika Pamhepo
Shantou zvokutambisa musika
China Import Nhau
1. Ndezvipi zvinhu zvandinogona kutenga kubva kuChina Wholesale Market?
1. Zvinhu zveKisimusi neMabiko 2. Zvidhori 3. Zvinhu zvePurasitiki nePamba 4. Zvinhu zveCeramic neGirazi 5. Mabhokisi Ekutakura neMabhegi. Shandisa Zvinhu 11. Hembe uye Kupfeka 11. Masheets emubhedha uye Mahwindo Ekuvata 12. Zvishandiso zveMachira 13. Zvinhu ZveMitambo 14. Zvipfuyo zvePeturu 15. Zvakawanda zvakanyanya
Yiwu sezvo guru rezvokutengeserana munyika . Unogona kuwana chero chaunoda ipapo. Nekuti dunhu rega rega rine basa raro, saka takavaka hofisi muYiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou kusangana nezvinodiwa nevatengi.
2. Basa rako rakadii?
1. Source zvigadzirwa zvaunofanira mutume mashoko
2. Yiwu Market Guide uye Factory odhita
3. zvirevo Place uye kutevera kugadzirwa
4. Product repacking vagoronga
5. rokuongorora uye unhu kuzvidzora
6. Free okuchengetera uye nenzvimbo basa
7. Bayirai importing kubvunza
8 Bata magwaro akakodzera
9. Kuchenesa tsika uye kutumirwa
Tinogona kuita zvinopfuura zvaunofunga
3. Pandinoenda kune yiwu, tinoshanda sei pamwe chete?
1. Unonditumira purogiramu yako yerwendo kuti ikubatsire kunyoresa hotera nekutakura.
2. Ticharonga tsvimbo mbiri dzekutevera newe uye tishande mumusika kana kufekitori
. Tichatumira ruzivo rwese husiku kana kupurinda gwaro iri mangwanani anotevera.
4. Unofanira kuenda kuhofisi yangu kunoongorora nekusimbisa mirairo usati wabva muYiwu.
Isu ronga zvose pachine, kufanana: hotera, zvekufambisa, namatanda, zvishandiso (tepi, notibhuku, kamera nezvimwewo ..), fekitari ruzivo, zvigadzirwa sourcing ruzivo. Clients musafunganya mabasa muna Yiwu.
4. Mutengo wako wakaderera pane vatengesi 'kubva kuAlibaba kana Kugadzirwa kuChina?
Vanopa rubatsiro mumapuratifomu eB2B vanogona kunge vari mafekitori, makambani ekutengesa, yechipiri kana kunyange chikamu chechitatu middlemen Kune mazana emutengo wechigadzirwa chimwe chete uye zvakaoma kwazvo kutonga kuti ndivanaani nekutarisa webhusaiti yavo. China isati yaziva, hapana yakaderera asi yakaderera mutengo muChina.
Isu tinochengeta vimbiso yekuti mutengo wakataurwa wakangofanana newemutengesi uye hapana chero imwe muripo wakavanzika. Isu tinokupa iwe nzira iri nyore yekutenga zvinhu kubva kune vakasiyana vatengesi vanogona kunge vari mumaguta akasiyana Izvi ndizvo izvo B2B papuratifomu vatengesi 'havagone kuita nekuti ivo vanowanzo tarisa pane imwechete munda zvigadzirwa.
5. Ndeipi nguva yangu yekutora ichatora?
. Iyo yekuendesa nguva inowanzo tarisa pazvinhu zviviri: chinhu kuwanikwa uye kutumira masevhisi.
. Isu tinopa vatengi nesevhisi yekufambisa sevhisi, senge Express, kutakura nendege, Kutakurwa kwegungwa, njanji yekufambisa, FCL uye LCL.
6. Pane chero MOQ kana uchiisa maodha kubva kwauri?
Kana mafekitori ane masheya akakwana, tinogona kugamuchira yako yakawanda;
Kana pasina masheya akakwana, mafekitori angabvunza MOQ kugadzirwa kutsva.
7. Tinoita sei kubhadhara?
1. Mushure mekurairwa kwaiswa, iwe unofanirwa kubhadhara makumi matatu% ezvekukosha kwezvinhu se deposti kwatiri (Zvigadzirwa zveAnti-denda zvinoda kubhadhara makumi mashanu muzana ezvekukosha kwezvinhu sedipoziti).
2. Govera anochinjika ekubhadhara mazwi, chero nguva yekubhadhara T / T, L / C, D / P, D / A, O / A inowanikwa pane yedu mutengi kudiwa.
8. Kana ini ndatotenga kubva kuChina, unogona kundibatsira kutumira kunze?
Ehe! Mushure mekutenga kwako wega, kana uchishushikana nezvekuti mutengesi haakwanise kuita sezvaunoda, tinogona kuva mubatsiri wako kusundira kugadzirwa, kutarisa mhando, kuronga kurodha, kutumira kunze, kuzivisa tsika uye mushure mekutengesa sevhisi. Mari yebasa inotaurika.
9. Sei uchida mutengesi yiwu mumiriri
1. Zvinopfuura makumi masere muzana emafekitori haana yavo Yekunze Chitupa License
2. Mazhinji mafekitori haana zvakakwana Spanish kutaura & Chirungu vanotaura vashandi vanoshanda nevadiki-vepakati vatengi veChina.
3. Vazhinji vevatengesi vavakaona sekambani yekutengesa kuChina asi vanonyepedzera kuva fekitori chaiyo uye vatengi havagone kuvaudza kubva kune ruzivo rwekunyepa online.
4. Naizvozvo kutengesa mutengesi kunoda. Yeyakanaka-yekumira yekutenga mumiririri sevhisi haingogone chete kudzora njodzi mukutenga kubva kuChina asi zvakare inogona kukubatsira iwe savelot yenguva, mutengo uye kuyedza mukutsvagisa, kuongorora, kwemhando yepamusoro kutonga uye mushure mekutengesa masevhisi.
10. Ndeapi masimba?
1. Anopfuura makore makumi maviri nematatu ruzivo rwekunze & ekisheni mumiririri
2. Iva neanopfuura mazana mazana maviri emitanda. Vazhinji vevashandi vedu vane ruzivo pamusoro pemakore gumi. Ivo vanoziva musika zvakanyatsonaka uye nguva dzose vanogona kuwana chaipo vatengesi zvakanaka.
3. Boka redu rakavaka hukama hwakasimba hwekutengesa nevanopfuura 10000 mafekitori eChina uye vatengi ve1500 vanobva pamusoro penyika zana nemakumi maviri. Senge America, Brazil, Venezuela, Mexico, Colombia, Argentina, Spain, Peru, Paraguay uye zvichingodaro
4. Inowanikwa muYiwu, zvakare ine hofisi muYiwu, Ningbo, Shantou, Guangzhou
5. Iine 10,000m² imba yekuratidzira uye 20,000m² imba yekuchengetera
6 Vashandi mazana mashanu vanotaura Chirungu neSpanish
11. Ndingaenda sei kuguta reYiwu?
The Yiwu riri pedo kwazvo Shanghai uye Hangzhou, unogona kutora kumhanya chitima kana bhazi guta kubva Shanghai, kana uchida, isuwo aigona kuronga motokari tonotora kubva yendege.
The yiwu dzine kutiza mutsetse kubva Guangzhou, shenzhen, shantou uye Hong Kong.
12. Zvakadii nezvekuchengetedzwa kweruzhinji kweYiwu?
Guta reYiwu rakachengeteka uye rakanyarara, iwe uchaona vazhinji vatorwa vachifamba-famba kunyangwe nguva iri pakati pehusiku. Vachaenda kubhawa kana kuenda kupati neshamwari.
Wepamusoro China Sourcing Agent ane makore makumi maviri nematatu ruzivo, anokutsigira kubva pakutsvaga kusvika pakutumira.
Kero: Kwete 531 Zongze North Road, Yiwu China